Free service online. Calculator amapulangwe
Ukubalwa izingodo lithi wanqunywa
Khetha idatha kokuqala sokubalwa
Inani izingcezu N
Ubuningi per cubic metres E
Izindleko 1 imitha cubic
W - The Ububanzi ibhodi
H - IBhodi Ubukhulu
L - Ubude ibhodi
N - Inani izingcezu
E - Ubuningi per cubic metres
Abaningi ukwakhiwa ekhaya lakho noma zokugeza sibhekene isidingo ukubala kuyadingeka kangakanani amapulangwe for the job. Thola Ukuthi Lungakanani udinga amabhodi noma imishayo, elula. Kodwa ngokuvamile inani amapulangwe kuboniswa per imitha cubic, futhi kulokhu sikuvumela ukusebenzisa sokubalwa kohlelo ezikhethekile. Ngokusebenzisa indawo yethu wena, azi ubude, ububanzi kanye ukushuba of the ibhodi, kanye nenombolo yabo yizicucu, uyokwazi ukubala ukuthi zingaki metres of amapulangwe cubic udinga nokuthi kuzoba yimalini elilodwa cubic noma kwelinye ipulangwe.
Izingodo kangaka ngokuthi ngoba etholwe sawing we trunk esihlahleni. Lezigodo Used for ukwakhiwa, ifenisha, ezihlukahlukene isembozo kanye neminye imikhiqizo. Namuhla, lolu hlobo zokwakha ithandwa kakhulu. Wood esetshenziswa ukwenza Ukhuni omuhle kakhulu material ekuvikeleni, egcina umswakama ezinzile futhi akudingi ukwelashwa okukhethekile nokunakekela, okwenza kube ekahle ikakhulukazi.
Kuyinto lezigodo lithi wanqunywa, ibhodi nhlangothi zombili, hhayi edging ibhodi, ukwakha wesitimela. UBruce ugodo, kusetshenzwe bevela kuzo zonke izinhlangothi. The nocezu it has a section square noma aboncamane cross. I kabanzi kunazo esetshenziswa ekwakhiweni izingodo izindlu, obhavu kanye nezakhiwo abaphila.
Ukuphuca ibhodi ugodo enemisebenzi ukuthi ngenkuthalo esetshenziswa emsebenzini wokwakha ngaphandle isakhiwo, futhi ukuklanywa isikhala elingaphakathi. Ukuphuca ibhodi in a cross-section i isikwele side. Ibhodi Unedged ihlukile Imi ukuze imiphetho yayo musa ukusika, ngakho uhlala ungqimba ebonakalayo ye amagxolo esihlahla, kusukela lapho lokhu Imi ibhodi. Ukwakha ujantshi noma bar kuyinto bar, a ezincane cross-section kunokuvamile, futhi kabanzi ekwakheni.
Banqunywa ngokusahwa zingafani uhlobo izinkuni kusukela lapho okulungiselelwe. Benza kubo ezihlahleni softwood ezifana pine, ngesihlahla sonwele saseYurophu emi and larch. Futhi oluqinile ezifana oki, beech, birch, Aspen.
Kukhona lezigodo umswakama. Bathi zihlukaniswe eluhlaza kanye nomswakama kuka-22 per cent futhi eyomile nomswakama ngezansi amaphesenti angu-22. Okokuqala esetshenziselwa umsebenzi wokwakha, futhi owesibili ukwenziwa ifenisha.
Kukhona izinhlobo eziningana amapulangwe. Grade Choice incike isicelo. Ngakho, ifenisha ukusetshenziswa izakhi grade ephakeme. Ukuze joinery nemikhiqizo ukubunjwa amapulangwe ezifanele amamaki 1 no 2 no 3 ebangeni isetshenziswa kuphela njengoba ibhodi ukwakhiwa.
Lezigodo banqunywa ngokusahwa, uma kungenjalo ingasetshenziswa isikhathi eside, kudingeka ukuba bavikeleke umswakama. Lokhu kungaholela ukuwohloka kwabo. It is hhayi Kunconywa ukuba esitolo imithi embondelene phezu nomunye. Phakathi zamatshe amabhodi noma amapulangwe kumele napkin.